Chain Link Fence anonziwo madhaimani waya pajira riya nechinhu nedhaimani yokutanga. Zvinonzi yaakaita siyana simbi waya kugadzira nokuda cheni kubatana fenzi muchina. Our zvinhu cheni linked fenzi zvinowanikwa Stainless simbi, kwakakurudzira, uye PVC zvemapuranga waya. Vari yaiwanzoshandiswa paminda, muchivanze mitambo, maindasitiri nzvimbo, dzimba, migwagwa uye zviitiko kuti boka kudzora. Weaving uye Features: dzakafanana okusuma, flat pamusoro, nyore kurukiswa uye zvinobatsira. Nyore uye kusanduka kuti chokugadza unobatanidza. Trả ...
Min.Order Quantity: 100 Meter / mamita
Supply Mano: 80000 Meter / mamita pamwedzi
Chain Link Fence anonziwo madhaimani waya pajira riya nechinhu nedhaimani yokutanga. Zvinonzi yaakaita siyana simbi waya kugadzira nokuda cheni kubatana fenzi muchina. Our zvinhu cheni linked fenzi zvinowanikwa Stainless simbi, kwakakurudzira, uye PVC zvemapuranga waya. Vari yaiwanzoshandiswa paminda, muchivanze mitambo, maindasitiri nzvimbo, dzimba, migwagwa uye zviitiko kuti boka kudzora.
Weaving uye Features: dzakafanana okusuma, flat pamusoro, nyore kurukiswa uye zvinobatsira. Nyore uye kusanduka kuti chokugadza unobatanidza. Traditional Chain-Link Fencing ndiyo sarudzo yakanaka kuti akachenjera, akachengeteka, muganhu inodiwa kuti indasitiri. Tinobudisa maindasitiri cheni linked fenzi with hot-vakanyika kwakakurudzira, PVC zvemapuranga uye Stainless simbi waya. The kupfuura mukurumbira iri kwakakurudzira cheni kubatana noruzhowa, iro rine nemishonga chakanaka mvura uye mumhepo ngura. Zvisinei, PVC zvemapuranga cheni linked mukurumari kunopfuura kwakakurudzira fenzi.
Kune zvitatu kumucheto mhando kusarudza: goona - goona, monyorora - monyorora kana goona - monyorora. Chain linked noruzhowa pamwe monyorora kazhinji wedzera akachengeteka.
Knuckling - This izwi rinoshandiswa kutsanangura mhando selvage vakawana nokupiringidza pedyo yegwara waya migumo uye ipapo vaikunga waya inoguma shure kupinda namahwindo loop. Kazhinji goona ndiye chiero kutoti zvimwe yakati.
Achitsaudzira - This izwi rinoshandiswa kutsanangura mhando selvage yaunganidzwa Achitsaudzira pedyo yegwara waya inoguma pamwe chete namahwindo akamonyoroka pamusoro 1-1 / 2 muchina majana, inova yakaenzana nhatu dzizere dzinokanganisa, uye cuffing kuti waya rinoguma unopinza angled kupa unopinza pfungwa. The waya inoguma mhiri monyorora achava kanenge 1/4 padiki (6.4mm) refu.
Chain Link Fence Magadzirirwo:
Chain Link Fence Magadzirirwo: Wire dhayamita 1.2mm - 5.0mm,
Mesh saizi 20mm -100mm
Roll upamhi 0.5m, 1.0m, 1.25m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.5m
Roll kureba 10M-50m .
Izvo fenzi Ndinofanira kutenga, kwakakurudzira kana PVC zvemapuranga cheni-batanidzo fence?
Kana uchida cheni linked fenzi akamira makore 30-40, unofanira kutenga chete fenzi ane waya dhayamita kuti 3mm - 4mm. Kana uchida kuva anokwezva vanofanira kutenga PVC zvemapuranga fenzi chitarisiko. Just vanoda kudzivirira pamusoro ngura, unogona kusarudza noruzhowa pamwe kwakakurudzira. Kana uchironga kuisa fenzi kupinda mamiriro ezvinhu akaoma: pedyo negungwa kana iri iine acid fekitari yacho. Ndapota kutenga PVC zvemapuranga cheni linked fenzi. Nekuti gungwa munyu mhepo uye iine acid mhepo nokukurumidza kukanganisa zingi pamusoro, asi havagoni kukurira polymer unhani.
Electro kwakakurudzira Chain Link Fence
Hot vakanyika kwakakurudzira Chain Link Fence
Welded Mesh Panel-Hot-Dip kwakakurudzira Afte ...